Solar PV Connector Vanopa uye Fekitori - China Solar PV Kontakita Vagadziri
Solar Panel Connector MC4 Iine DC 1000V TUV Yakatenderwa basa rePV system yekubatanidza solar panel uye mubatanidzwa webhokisi. MC4 Connector inoenderana neMultic Contact, Amphenol H4 nevamwe vanopa MC4, inogona kukodzera waya yekudziya 2,5mm, 4mm uye 6mm. Kubatsira kwakakurumidza uye kwakavimbika kubatana, UV kuramba uye IP67 isina mvura, inogona kunge ichishanda kunze kweye 25years.
Multi Kutaurirana 4 Solar Cable Connector 1500V 50A inoshandiswa kubatanidza solar panel uye Inverter muSolar magetsi chiteshi. MC4 Connector inoenderana neMultic Kutaurirana, Amphenol H4and mamwe marudzi MC4, uye yakakodzera kutenderera solar, 2,5mm, 4mm uye 6mm. Solar Connector Advantage inokurumidza uye yakavimbika kubatana, UV kuramba uye IP68 isina mvura ine 25years hupenyu waranti.
MC4 Solar Panel Connector ye solar cable 10mm2
MC4 Solar Panel Connector ye solar cable 10mm2 inoshandiswa muSolar system yekubatanidza solar panel uye Inverter. MC4 Connector inoenderana neMultic Kutaurirana nedzimwe mhando MC4, uye yakakodzera kutenderera solar, 2,5mm, 4mm, 6mm uye 10mm. MC4 Advantage inokurumidza uye yakavimbika kubatana, UV kuramba uye IP68 isina mvura, inogona kunge ichishanda kunze kwe25years.
10x38mm Solar Fuse Inline akabata 1000V MC4 Fuse Connector
10x38mm Solar Fuse Inline inobata 1000V MC4 Fuse Connectorwork muSolar PV system kuchengetedza iyo yakanyanya-mutoro iripo kubva kune solar panel uye Inverter. 10x38mm Solar Fuse Connector inoenderana neMultic Kutaurirana uye mamwe marudzi e4M4, uye yakakodzera kutenderera solar, 2,5mm, 4mm uye 6mm. Anobatsira ndeye inline fuse inogona kutsiviwa, nekukurumidza uye yakavimbika kubatana, UV kuramba uye IP67 isina mvura, inogona kunge ichishanda kunze kwe25years.
Solar In Converter Connector MC4 M12 PV Panel plug basa muSolar chiteshi kuti ubatanidze solar panel uye Inverter. MC4 Connector inoenderana neMultic Kutaurirana uye imwe MC4, uye yakakodzera kutenderera solar, 2,5mm, 4mm uye 6mm. Advantage inokurumidza uye yakavimbika kubatana, UV kuramba uye IP67 isina mvura, inogona kunge ichishanda mu inverter, controller bhokisi uye kunze kwe25years.
MC4 Solar Diode Chidimbu cheSolar Panel Connection
MC4 Solar Diode Connector YeSolar Panel Connection inoshandiswa muPV Kudzivirira Reverse DIODE MODULE uye Solar PV system yekudzivirira iyo yazvino backflow kubva kune solar panel uye Inverter. MC4 Diode Connector inoenderana neMultic Kutaurirana uye dzimwe mhando MC4, uye yakakodzera kutenderera solar, 2,5mm, 4mm uye 6mm. Kubatsira kwakakurumidza uye kwakavimbika kubatana, UV kuramba uye IP67 isina mvura, inogona kunge ichishanda kunze kweye 25years.
MC4 Yobatanidza Dust Proof Yakavhara Chisimbiso cap
MC4 Connector Dust Proof Cover Chisimbiso Chisimbiso cap inoshandiswa kune MC4 solar yekubatanidza murume uye mukadzi, kuchengetedza kubva kuguruva uye nemvura mune solar inverter uye nemagetsi esolar system.